Halloween - habeen oo buuxda jinniyada | Apg29
Xaqiiqada ku saabsan Halloween. Halloween waa wax ka badan caadadii duug ah jaahilka in mid ka mid ma galaan waa in, ugu yaraan ah oo dhan Christian a. Geeri iyo shar waa ammaanmay.
In 1840s ah, waxaa isaga la qaaday inta badan Irish this dabaal Celtic markii u haajirtay America. In America, waxa ay noqotay diyaafad weyn, xitaa ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah oo la xusaa October 31. From America, waxa uu leeyahay "Americanized" muddo sannado ah qaar ka mid ah, ku soo laabtay Europe leh "skulls" godkii of bocorka, saaxirad-set, waji laga argagaxo, scythes, iyo mudacyadii Ibliiska iyo tombstones in caag ama qoryo.
"Sidaas in ay sida ay u dilaan, ayeeyo, aabbihiis, walaalaha, saaxiibada eegi lahaa sida haddii ay dhintay ka soo noqdeen sidii Kyung, Qalfoofkii iyo jinniyo!"
Halloween waa arrin pre-Christian jaahilka ka mid Celts dadka kooxda in uu asalkiisu ka soo jeedo inta badan. Kuwaas oo asal ahaan ka soo jeedeen Aasiyada Yar, iyo tan iyo Galatiya (Turkey casriga ah).
Celts ayaa lagu xusay taariikhda Yurub, markii ugu horeysay ee 500 BC, marka dib markii uu socdaalka ku noolaa qaybta waqooyi ee markaa Europe; agagaarka Danube iyo galbeedka Germany. In Europe, waxay magaca "gaeler" ama "Roobka" tegey.
Inta lagu guda jiro waqti fidinta dulmiga Celts ballaariyeen aaggooda, galbeed dhinaca Belgium iyo gaar ahaan Britain, gaar ahaan Ireland, xagga koonfureed ee Italy iyo Spain, iyo xagga bari si Aasiyada Yar, halkaas oo mar kale ay degeen ee Galatiya.
"Galates" sidoo kale wuxuu ahaa magaca Giriigga ah ee Celts ah. Tartiib tartiib u yimid Scotland, Wales iyo Ireland gaar ahaan, in la arkaa sida guriga Celts ah. ciidaha diiniga ah Celtic, iyo nolosha guud ahaan, waxaa la soo dhex mariyey Occultism iyo adeegsiga awoodda by druids ah (wadaad-boqorrada). allabari dhaqan of dhirta, badanaa Mistletoe iyo cuntada la kariyey, kibis farxad leh, waxay ahaayeen xubno caadi ah, laakiin sidoo kale allabaryo aadanaha dhacay (eeg Lindow Man ee Manchester, kuwaas oo lafaha la ogaaday in 1984).
Geeri iyo nolol ilaah Samhain
Stonehenge ee England waxaa loo arkaa mid ah magangalyo-casriga ah ee "keltism", in ay ururiyaha a aadka wax ku ool ah oo awood sixir ah. Tani waa meesha ugu påskkäringar maalin casri ah oo shamans in séances iyo dabaaldegyada dhaqan. Celts ayaa iiddii beergooyska iyo sannadka cusub on November 1. Waxay ahayd maalin jaahilka quduuska ah. Xisbiga calaamadeeyay dhamaadka xagaagan iyo sidaas dhimasho iyo dayrta soo galo madow ee dabiiciga ah, oo iniinahoodu ku dhex jiraan loogu tala galay bilowgii cusub ee nolosha. In dhulka, ee caleemaha dhacday, magooshay nalalka cusub.
Waqtigan oo kale sanad kasta ayaa sidoo kale loogu tala galay, in ilxidhka u dhexeeya dadka dunida ku nool oo ay dunida oo dhintay (inta u dhaxaysa gii) ahaa thinnest. fiidkii ka hor sannadka cusub, waxan "fiidkii quduuska ah", ka "quduus Eve", ie October 31, marka ay wax fikrad ah in kuwii dhintay, ugu yaraan kuwa dhintay intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay, iyo kuwa kale, tamartaa wanaagsan iyo kuwa xun iyo jinniyadooda labada - ku soo laabtay dhulka hoos maareynta nolol iyo geeri ilaah (iftiinka iyo mugdiga) Samhain. Waxa uu meesha ka saaray in labada Cosmos iyo She'ool.
On 31 October Sidaas daraaddeed labada nool oo dhan oo dhintay makhribkii. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "awoowe Night," "Anfädernas Night" ama "habeenka awowayaashiin '".
Kulan la sixir cad iyo madow
Markii kuwii dhintay, iyo kuwa kale tamartaa iyo jinniyadooda, in Earth yimid caawa, lahaa in, on gacanta ku hal, shiday shumacyo iyo dabshid for wanaagsan oo ay ku sameeyeen meelaha ay ka soo dhaweeyo, garto iyaga la, wada qanciso by si ay u eegaan iyaga oo kale, oo dhinaca kale ah in la isku qaldo bahal iyo dib cabsiiyo mar, eegi sii xumaadaa badan oo sii qabow guriga.
Light, dab, dhiig, calaamadaha dhimashada iyo gudcur ayaa isku qasan. White iyo sixirka madow ayaa la kulmay, kulli waxay ku laayeen oo Sixira madow. Druids shiday dabshid ballaaran in lagu cabsiiyo xayawaan khatar påskkäringar xumaan ah oo u soo duulaya. Dadka la weydiiyey in ay dibadda u saaray dabka reerka iyo halkii ay ka soo dejisan dab cusub by dabka Druids si ay uga badbaadaan.
Kuwa ka ruuxa dunida yimid, labada siin karaa hadiyadaha sannadka cusub, tusaale ahaan, yabooha soo laabashada iftiinka ka dib markii dayrta iyo jiilaalka iyo bacriminta wanaagsan ee sanadka soo socda - ama nafihii kuwii ku dhintay tan iyo fiidkii / habeenkii, download xitaa u baahan allabaryo aadanaha ee sanadka cusub. Waxay ka walaacsan faa'iidooyinka ama inkaarahan.
Halkan waxaa aasaas u ah arrimaha qaar ka mid ah carruurta casriga ah ee albaabka habeen ka hor oo dhan Maalinta Saints: "Candy ama bas", "Trick-ama-dawayn" ( "Spratt ama hadiyad"). Samhain la sheegay labada waase iyo Reaper ah Grim. Sidaa darteed waxaa la filayaa in ay ixtiraamaan. Christian Church The ee iidda Day Saints oo dhan, waxaa kacay inay ka guuleystaan ​​iid goosashada Celtic jaahilka.
Oo hore caadada ah Irish Christian ahaa inaan dawarsadona Waayo, kibistii in guryihii, iyo in soo laabashada, ku tukado, waayo nafaha oo ka mid ah qaraabada dhintay. Ugu dambayntii waxaa jiray jahwareer ah, laga yaabee jawaab weedhu "förkristnandet" - geedihii Asheeraah xurmada xataa jaahilka iyo meelihii sarsare la gooyaa oo bedelay kaniisadaha Masiixiga ah iyo qabuuraha - si ay "kuwa nool iyo kuwa habeenkii dhintay oo dhan," Fikirka jaahilka, ahaa, qaar ka mid ah kor u dhaqaaqo "Allahelgonaafton", si kale loo dhigo Halloween.
ka America soo laabtay
In 1840s ah, waxaa isaga la qaaday inta badan Irish this dabaal Celtic markii u haajirtay America. In America, waxa ay noqotay diyaafad weyn, xitaa ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah oo la xusaa October 31. From America, waxa uu leeyahay "Americanized" muddo sannado ah qaar ka mid ah, ku soo laabtay Europe leh "skulls" godkii of bocorka *, saaxirad-set, waji laga argagaxo, scythes, iyo mudacyadii Ibliiska iyo tombstones in caag ama qoryo.
data Qaar ka mid ah soo jeedinaya waxay ahaayeen guuto la kaftanka sanadkii 1991 bilaabay furitaanka ee Sweden. xaashidan A ka silsilad cunto ah dhawr sano ka hor waxay ahayd: "Sidaas ururin aad spökkompisar iyo Ibliiska saaxiibo in a xisbiga Halloween dhabta ah iyo in ay diyaar u habeen oo buuxda jinniyada."
Sidaas daraaddeed sida ay dilaan, ayeeyo, aabbihiis, walaalaha, saaxiibada eegi lahaa sida haddii ay dhintay ka soo noqdeen sidii Kyung, Qalfoofkii iyo jinniyo! Maxaad u labistaan ​​ma aha markaas dheeraad ah sida wax-u jinni oo wanaagsan iyo "Malaa'igta" Occultism, haddii aad rabto in ay ku daydaan qaraabada iyo saaxiibada ay ku dhintay - iyo in hadda laga wadaa in ay dib ugu noqonayaan?
Sida iska cad dabaal Halloween waayo, dalka Iswiidan ugu kaliya kulan aan waxba galabsan, oo aan wax u maleeyay in waxa uu noqon lahaa wax kale ka danbeeyaan. Laakiin sababta ay tahay in mugdi ah oo ay tahay in la raaxo muujiyey? Waxaa cabsi muddo walaac ku soo jireenka ah?
Dhalmada nin geerida si aad u hesho ka mas'uuliyad iska hor dhimashada dhabta ah? Halloween waa in loo arkaa baxsado lagama maarmaan ka dhab? Haa, Halloween waa wax ka badan caadadii duug ah jaahilka in mid ka mid ma galaan waa in, ugu yaraan ah oo dhan Christian a. Geeri iyo shar waa ammaanmay.
In dugsiga, carruurtu ku bartaan inay joojiyaan rabshadaha. Oo wuxuu ku hadlaa wax badan oo ku saabsan ilaalinta carruurta, ugu horreeya oo dhan ka fikirto danaha ugu fiican ee carruurta. The humanism iyo magaca xoriyadda bixiyeen waqti isku mid ah, kuwaas oo carruurta dhimashada iyo rabshadaha calaamadaha dugsiyada, warbaahinta iyo bulshada guud ahaan. heerarka Double iyo bikirka, waxaan idinku leeyahay! Sidee u baahan xisbi ka badan halkan Sweden xilliga dayrta dheer oo mugdi ah Ilaaheenna weyn, Halloween ma aha tusaale fiican!
Fadlan calaamadee, sida isagoo Masiixi ah, ee ku jirta ruuxa dunida iyo doodda dadweynaha on this fiidkii ilmo-aan furfurnayn jaahilka. Laakiin jawaab halka ciyaaro carruurta costumed in Christian a si caqli ah. Waxaad dhahdaa, tusaale ahaan, si raxmad leh, in aadan u dabaal Halloween. Dhib badan, laakiin sida caadiga ah ma run ahaantii ma noqon. Isku dayga in "Masiixiyiintu" Halloween, waxaan ula jeedaa Dhanka kale, waa qalad in ay tagaan.
* Sida laga soo xigtay halyeeygii ah Irish, waxaa jiray tumaal sharrow ah loo magacaabay Jack. Jack khiyaaneeyey Ibliiska iyo isagii ka dhigay yabooho marna uu naftiisa sheegan. Markii uu ugu danbeyn ku dhintay, oo uu ku beeniyay galo jannada, sababtoo ah wuxuu ka dhigay wax badan oo ku saabsan dhulka. Markaas ayaa sidoo kale wuxuu keeni karta in la Devil ah, ayuu ku hadhay naf wareegaya dhulka. Markaasuu wuxuu weyddiistay Devil in ay ugu yaraan ka heli yeelay siraad. Devil la markii dab yar ee dabocase qodnayd Jack cuneen. Tan iyo markaas ayuu u wareegaa gadis ku wareegsan oo uu "siraad" oo raadinaya meel ay joogaan. In kulan iyo hiddaha u yeedhay mid laambad sida for "Jack-o-siraad", gaar ahaan lagu doonayo in lagu cabsiiyo iska jinniyadooda sharka leh.